ကုသအချိန်ဇယား | မျှော်လင့်ခြင်း Medical Center မှတွင် Dream
On-Dream မျှော်စင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဌာန ၃ ဌာန(ဆေးဝါး, သားဖွား, အရိုး)၁၄ ခုအပါအ ၀ င်ဆိုးလ်ကြက်ခြေနီဆေးရုံသည်ဌာန ၁၄ ခုတွင်ရှိသည်, 3မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုသငျ့လျြောသောစောင့်ရှောက်မှုပေးဆိုးလ်အမျိုးသားတက္ကသိုလ်ဆေးရုံနှင့် တွဲဖက်. လိုအပ်ပါတယ်သောအခါ,. (※သာ, ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်အထောက်အပံ့ကိုစာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးနောက်ဆုံးဖြတ်သွားလိမ့်မည်။)
ပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်ကုသ, Neurosurgery, Thoracic နှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုသမှု၏အဘယ်သူမျှမဦးစီးဌာန
ရုံးကနာရီ : လေး 9:00~ 12:30, မှနျးလှဲ 13:30~ 17:30
ရုံးကနာရီ : လေး 9:00~ 12:00, မှနျးလှဲ 13:30~ 17:00
(နေ့လည်စာနာရီ : 12:30~ 13:30)
မျှော်လင့်ခြင်း Medical Center မှနာရီတွင် Dream
အခြားမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ, မျှော်လင့်ခြင်း Medical Center မှအတိုင်ပင်ခံတွင်အိပ်မက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်. ဖုန်းနံပါတ်. 02)2002-8683~ 4
မျှော်လင့်ခြင်း Medical Center မှနာရီတွင် Dream : သောကြာနေ့မှတနင်္လာ 09:00~ 17:00 / နေ့လည်စာနာရီ 12:30~ 13:30